.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: လေးဖြူ - ဒိုင်ယာရီ
လေးဖြူ - ဒိုင်ယာရီ
ဒီ သီချင်းကို သူငယ်ချင်းတွေ အရမ်းကို စောင့်မျှော်နေကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။MyanmarMusicStore မှာ ဒီနေ့မှ
တင်ပြီး ရောင်းတာပါ။ အနော်တို့ နိုင်ငံခြားက လေးဖြူ ပရိတ်သတ်တွေကျတော့ ဝယ်ဖို့ဆိုတာသိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။
အဲဒီအတွက် ဝယ်ပြီးတော့ လိုင်းပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထပ်ရှယ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
အောက်မှာ နားထောင်လို့ရော ဒေါင်းယူလို့ပါ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အနော်တော့ ပျော်လိုက်တာေိေိ
Lay Phyu - D A I R Y
Listen: Cilck Here !!
Download: Click Here !!
Size: 3.90 MB | Quality: 128kbps
သီချင်းချစ်သူများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ.။ လာလည်ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။